Shirkii Istanbuul, kulamadii hoose iyo natiijooyinkii kasoo baxay (Sawiro) • Horseed Media
You are here: Home / Featured / Editorial / Shirkii Istanbuul, kulamadii hoose iyo natiijooyinkii kasoo baxay (Sawiro)
Shirkii Istanbuul, kulamadii hoose iyo natiijooyinkii kasoo baxay (Sawiro)
May 23, 2010 - By: Khalid Yusuf
Waxaa maalinimadii shalay (22-May-2010) lagu soo gab gabeeyey magaalada Istanbuul ee dalka Tukriga shirkii Caalamiga ahaa ee Qaramada Midoobay soo diyaarisay ee looga hadlayey xaalada dalka Soomaaliya.
Shirkan oo ay ka qeyb qaadaneysay dowlada Turkiga ayaa waxaa kasoo qeyb galay wafuud kala gedisan oo ka socda wadamada iyo ururada daneeya arrimaha Soomaaliya kuwaasi oo ay kamid ahaayeen dalalka; Maraykanka, Midowga Yurub, Midowga Afrika, Jaamacada Carabta, dalalka Islaamka, IGAD iyo diblumaasiyiin kale.
Waxaa sidoo kale shirkan kasoo qeyb galay wafdi ka socda Dowlada Federaalka kumeel gaarka ah ee Soomaaliya oo uu hogaaminayo Madaxweyne Shiikh Shariif Axmed iyo wafdi ka socda Dowlada Puntland oo uu hogaaminayo Madaxweyne Dr.Cabdiraxman Maxamed Faroole.
Shirkan ayaa ah kii labaad marka laga yimaado shirkii Belguim ka dhacay sanadkii hore April 2009, middkii ugu balaarnaa oo looga hadlayo xaalada iyo dib u dhiska wadanka Soomaaliya.
Qodobada ugu muhiimsan ee diirada lagu saarayey shirkan ayaa ah xaalada siyaasadeed ee ka jirta dalka Soomaaliya, dagaalada sii socda, burcad badeeda, arrimaha biniâ€™aadamnimo iyo dib u dhiska dalka Soomaaliya.
Wafuuda ka socotay dalka Soomaaliya ayaa ayagu halkaasi kusoo bandhigay warbixino ku aada baahida ka jirta dalka iyo codsiyadooda mashaariicda horumarinta.
Baaq Caalami ah:
Geba gabedii shirkan ayaa laga soo saaray baaq caalami ah oo ku wajahan dalka Soomaaliya iyo beesha Caalamka. Baaqan ayaa looga codsaday wadamada deeq bixiyayaasha inay dar dar geliyaan fasixida ama bixinta lacagihii horey loogu balan qaaday dalka Soomaaliya in dib loogu dhiso hayâ€™adaha amniga iyo dowlada.
Baaqan ayaa si gaar ah looga hadlay in dalka Soomaaliya loo dhiso ciidamo awoodleh oo tababaran iyo maamulkooda oo khibradleh, ayadoo sidoo kale la dhiiri geliyey in dowlada Federaalka ay dhameystirto goâ€™aamadii shirkii dib u heshiisiinta ee dalka Jabuuti.
Dowlada Federaalka ayaa loogu hanbalyeeyay heshiiskii ay la gashay kooxda Ahlu Sunna Waljamaaca oo ku aadan wada shaqeynta iyo waliba heshiiskii ay la gashay dowlada Puntland bishii Agoost 2009, ee ku aadanaa la dagaalanka burcad-badeeda.
Waxaana lagu sheegay in loo baahan yahay in wax badan laga qabto arrimaha biniâ€™aadamnimo ee dalka Soomaaliya ka jira, ayadoo loogu baaqay Dowlada Federaalka inay ay xil iska saartoÂ sidii taakulada loo gaarsiin lahaa dadka tabaaleysan.
Shirkan ayaa looga hadlay kaalinta ay Ganactsada ka geysan karaan dib u dhiska Soomaaliya, ayadoo ay jiraan qorsheyaal ku aadan sare u qaadida ganacsiga iyo dhaqaalaha Soomaaliya oo ay soo gudbiyeen wafdiga ka socday Dowlada Federaalka kuwaasi oo sheegay in kaabayaasha loo baahan yahay in caalamka gacan kasiiyo ay kamid yihiin lix qeybood;
1. Isgaarsiinta / telecommunications;
2. Dhismaha wadooyinka;
3. Dhoofinta xoolaha;
5. Bangiyada iyo xawaaladaha
Waxaa baaqan sidoo kale loo diray Shacabka Soomaaliyeed ayadoo loogu baaqay inay iska kaashadaan sidii ay uga wada shaqeyn lahaayeen nabadeynta dalkooda, meelna uga soo wada jeesan lahaayeen kooxaha kasoo horjeeda inay nabadi ka dhalato dalka Soomaaliya.
Wafdiga ka socda Dowlada Federaalka ayaa ayagu qoraalkii ay shirka usoo gudbiyeen ku sheegay inay ka goâ€™an tahay hirgelinta heshiiskiiÂ shirkii Jabuuti iyo waliba u shaqeynta shacabka Soomaaliyeed.
Dowlada Federaalka ayaa sheegtay inay sii wadi doonto dadaalka ay ugu jirto dhismaha Dowlad wanaagsan, dhismaha kaabayaasha Dowlada iyo hayâ€™adaha asaasiga ah ee dalka Soomaaliya.
Waxaa markii ugu horeysay shir noocan ah ayaguna ka qeyb galay wafdi ka socda Dowlada Puntland oo uu hogaaminayo Madaxweyne Cabdiraxman Maxamed Faroole.
Shirkan ayaa baaqii kasoo baxay lagu sheegay in Beesha Caalamka ay dhiiri gelineyso Dowlada Puntland inay sii wado wadashaqeynta ay la leedahay Dowlada Federaalka dhanka la dagaalanka burcad badeeda, amniga iyo dib u dhiska dalka Soomaaliya.
Waxaana sidoo kale lagu daray Baaqa kasoo baxay kulankan in Beesha Caalamka laga codsanayo inay gacan ka geystaan mashaariicda horumarinta ee gobalada Soomaaliya gaar ahaan Puntland, isla markaana la hirgeliyo dhameystirka Airporada magaalooyinka Bosaaso iyo Garowe.
Maamulka Soomaaliland ayaa sidoo kale loogu baaqay in doorashooyinka soo socda ay si nabad ah ku dhacaan, walow aysan shirkan ku sugneyn wax wafdi ah oo ka socday Somaliland.
Beesha caalamka ayaa si gaar ah ugu mahadnaqday wadamada ciidamada usoo diray dalka Soomaaliya ee ka kala socda Ugandha iyo Burundi, ayadoo labadaasi wadan lagu amaanay kaalinta baaxadaleh oo ay ka geysteen hawlaha nabad illaalinta ah ee ciidamadooda ay ka wadaan magaalada Muqdisho.
Wasiirada Arrimaha Dibada ee dalalka Burundi Mr. Augustin Nsanze iyo Wasiirka Difaaca ee dalka Ugandha Mr. Crispus Kiyonga ayaa ku sugnaa shirka ayagoo sidoo kale, si gaar gaar ah ulla kulmay Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Ban Ki Moon, isla markaana kala hadlay dhanka dhaqaalaha la doonayo in lagu bixiyo ciidamada wadamadaasi ka jooga dalka Soomaaliya.
Wadamada Ugandha iyo Burundi oo dhaqaalaha ciidamadooda AMISOM ku baxa ay tahay mid baaxadleh ayaa quudareenaya in Qaramada Midoobay ayÂ dar dargeliso balanqaadyadii hore ee ku aadanaa in dhaqaale horleh wadamadaasi lagu siiyo hawlgalkooda Muqdisho.
Wadamada IGAD ee jaarka la ah Soomaaliya ayaa shirkan ku sugnaa, waxaana kamid ahaa wafuudii shirka joogay koox diblumaasiyiin ah oo uu hogaaminayey Wasiirka Arrima Dibada ee dalka Kenya Moses Watangula.
Watangula iyo Ban Ki Moon oo kulan khaas ah wada qaatay ayaa ayaguna ka wada hadlay kaalinta ay wadamada jaarka la ah Soomaaliya ay ka geysan karaan, nabadeynta Soomaaliya.
Dalka Kenya ayaa xiligan wada tababaro la sheegay inuu siinayo ciidamo Soomaali ah oo la tuhunsan yahay in qaarkood loo wado dalka Soomaaliya, walow dowlada Kenya ay sheegtay in ciidamadaasi loo tababaro sugida amniga gobalada Waqooyi Bari ee dalka Kenya.
Wadanka Itoobiya oo lagu yaqaan inuu si gaar ah u daneeyo arrimaha Soomaaliya ayaa shirkan si weyn uga dhexmuuqan, inkastoo xiliga shirka kusoo beegmay wakhtiga Doorashooyinka dalkaasi, hase yeeshee waxaa la oron karaa Dowlada Kenya waxay tusaale ka qaadan kartaa Dowlada Itoobiya oo dhawaan ayaduna sameysay ciidamo u badan Soomaali oo ay sheegtay inay sugayaan amniga gobalada saaran xadka dalka Soomaaliya. Ciidamadaasi ayaa ah kuwii todobaadkan iska horimaadka ka bilaabay magaalada Buuhoodle ee gobalka Cayn.
Qaramada Midoobay ayaa codsiyada ay u gudbisay wadamada Jaarka la’ah Soomaaliya, waxaa kamid ahaa in dowladaha sida Kenya ay sii wadaan maxkamadeynta kooxaha burcad badeeda ee laga soo qabto xeebaha dalka Soomaaliya, ayadoo laga codsaday beesha caalamka in dalalkaasi ay gacan ku siiyaan dhanka dhaqaalaha.
Maraykanka ayaa wafdiga usoo diray shirkan uu hogaaminayey Ergayga Maraykanka u qaabilsan Afrika Mr. Johnnie Carson. Maraykanka ayaa kamid ah wadamada sida gaarka ah xiligan u daneeya arrimaha Soomaaliya, gaar ahaan dhanka la dagaalanka waxa ay ugu yeeraan argagaxisada iyo Burcad badeeda.
Johnnie Carson ayaa kulan khaas ah magaalada Istanbul kula qaatay Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Ban Ki Moon ayagoo ka wada hadlay arrimaha dalka Soomaaliya, iyo kaalinta dhaqaale ee uu dalka Maraykanka ka geysan karo qorshaha Qaramada Midoobay ee ku aadan Soomaaliya.
Wafuuda ka kala socotay Midowga Yurub ayaa ayagu si gaar ah u daneenayey arrimaha la dagaalanka Burcad badeeda oo lagu wado in dhawaan Midowga Yurub dhaqaale baaxadleh ku bixiyo qorshayaal iyo mashaariic looga hortagayo burcad badeeda ka hawlgasha xeebaha Soomaaliya.
Wafuuda kulankan ku sugnaa waxaa kamid ahaa Mr. Andris Piebalgs oo ah Xoghayaha Horumarinta u qaabilsan Midowga Yurub iyo wafdi ka socda dalka Spain oo uu horkacayey Wasiirka Arrimaha Dibada ee dalkaasi Spain Mr. Miguel Ãngel Moratinos CuyaubÃ©.
Dalka Spain ayaa lagu wadaa inuu bisha September ee sanadkan 2010 marti geliyo kulanka Guddiga Xiriirka Caalamiga ah ee Soomaaliya.
Baaqa kasoo baxay kulankan ayaa lagu sheegay in shacabka Soomaaliyeed aysan marnaba ka rajo dhigin xal u helida dalkooda, ayadoo lagu sheegay in iskaashi dhexmara shacabka, dowlada, ganacsatada iyo Beesha Caalamka uu soo dadajin karo xal u helida dalka Soomaaliya.
Marka laga yimaado kulamadan gaar gaarka ah ee ka dhacay magaalada Istanbuul, waxaa asagu kulankan uu ahaa kii labaad oo noocaan ah oo uu ka qeyb galo Madaxweynaha Soomaaliya Shiikh Shariif Axmed, oo horey fursad caynkaan ah u helay kulankii ka dhacay dalka Belguim ee dhaqaalaha loogu doonayey dalka Soomaaliya.
Shiikh Shariif Axmed ayaa soo dhaweyn balaaran kala kulmay madaxda Qaramada Midoobay iyo dowlada Turkiga ee shirkan marti gelisay.
Dhinaca kaleÂ marti qaadyada loo qabanayey Madaxweynaha iyo wafdigiisa, waxaana ayaduna meesha ka marneyn canaanta ku dhaceysay wafdiga Dowlada Soomaaliya ee ku aadan waxqabad laâ€™aanta dowlada Soomaaliya iyo khilaafyada badan ee ka dhexmuuqda dowlada dhexdeeda.
Hadaba shirkan ayaa ahaa mid fursad u ahaa dowlada Soomaaliya inay kaga faaâ€™iideysato kaalmada caalamka, hase yeeshee waxaa si weyn u saameeyey khilaafkii soo kala dhexgalay dowlada Federaalka oo ahayd midda ay afka kuwada hayeen wadamada deeqda bixiya oo weli shakigii ay ka qabeen Soomaaliya aan meesha ka bixin.
Waxaa ayadunaÂ fursadan ka faaâ€™iideysatay Dowlada Puntland oo markii ugu horeysay wafdi gaar ah usoo dirsatay shirkan uuna horkacayey Madaxweynaha Puntland Cabdiraxmaan Faroole, ayagoo fursado bada u helay ayaguna dhankooda inay siÂ gaar ah ula kulmaan wafuudii kala gedisneyd ee caalamka ka socotay iyo shirakadaha caalamiga ah.
Waxaa kale oo guulÂ la oron karaa in baaqii shirkaasi kasoo baxay lagu daro in Beesha Caalamka ay ka qeyb qaadato mashaariicda horumarineed ee deegaanada Puntland.
Ugu danbeyntii shirkan waxaa dhamaan loo mahadnaqay dowlada Turkiga oo kaalin weyn iska saartay in shirkan ay marti geliso, xili Beesha Caalamka ay ka daashay ka hadlida arrimaha dalka Soomaaliya.
Balse suâ€™aasha weli taagan ayaa ah sida ay masâ€™uuliyiinta Soomaaliyeed uga faaâ€™iideysan karaan fursadahaasi iyo sida ay ugu adeegi doonaan shacabkooda.